६३ बर्षपछि केपटाउनमा इङल्याण्डको जित – Khel Dainik
६३ बर्षपछि केपटाउनमा इङल्याण्डको जित
एजेन्सी । दक्षिण अफ्रिकी भ्रमणमा रहेको इङल्याण्डले केपटाउनमा भएको दोस्रो टेष्टमा घरेलु टोलीलाई १८९ रनले हराउँदै सिरिजमाथि १–१ बराबरी गर्दै पूनरागमन जनायो ।
दोस्रो पारीमा दक्षिण अफ्रिकी टोली २४८ रनमा अलआउट हुन पुगेको थियो । केपटाउनमा इङल्याण्डले टस जित्दै पहिले ब्याटिङ रोजेर पहिलो पारीमा २६९ रन र दोस्रो पारीमा ३९१ रन बनाएको थियो । उता दक्षिण अफ्रिकाले भने पहिलो पारीमा २२३ रन बनाएर अलआउट भएको थियो ।
Ben Stokes does it again to lead England toaseries-levelling win in Cape Town #SAvENG https://t.co/csTxlDw6Pe pic.twitter.com/N8osIIyqtx
दोस्रो टेष्टमा अलराउण्ड प्रदर्शन गरेका बेन स्टोक्स म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले केपटाउनमा ११९ रन बनाउनुका साथै तीन विकेट समेत आफ्नो नाममा गराएका थिए । दोस्रो टेष्टमा दक्षिण अफ्रिकाले ४३८ रनको लक्ष्य पछ्याएको थियो । जसलाई घरेलु टोलीले पूरा गर्न सकेन ।
South Africa resisted for most of the day, but Ben Stokes produced more magic to secureadramatic win for England in Cape Town.
Report and highlights 👇
केपटाउनमा इङल्याण्डको ६ दशकपछिको ऐतिहासिक जित थियो । अर्थात केपटाउनमा इङलिस टोलीले ६३ बर्षपछि जित हात पारेको थियो । स्मरण रहोस, यसअघि इङल्याण्डले सन् १९५७ मा ३१२ रनको जित हात पारेको थियो ।
चार टेष्टको सिरिज अन्तरगत तेस्रो टेष्ट १६ जनवरीदेखि पोर्ट एलिजावेथमा शुरु हुनेछ ।
Stokes bowlsasnorter to completea189-run victory. First win for England in Cape Town since 1957. Series level 1-1. https://t.co/0DvAjsHCJ3 #SAvENG pic.twitter.com/R5FkFHliDQ
— Cricbuzz (@cricbuzz) January 7, 2020
← आइपिएलमा यस सिजन दिनमा एक खेल मात्र हुने किंग पावरको पहिलो लेगमा जोगियो लेस्टर (भिडियोसहित) →